သင်ဟာဂန္ထဝင်ပြတိုက်တွေကိုမကြိုက်ပေမယ့်ရှားရှားပါးပါးမူရင်း၊ ထူးခြားတဲ့ပြတိုက်တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်သွားမယ် မက်ဒရစ် အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ရပ်တန့်မထားပါနဲ့ ဖယောင်းပြတိုက်။ အနုပညာရှင်တွေ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အတုကဘာကြောင့်ဒီလောက်စွဲမက်စရာဖြစ်ရတာလဲလို့ဘယ်သူသိလဲ။
ပြတိုက်သည်စပိန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်၊ အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည် Paseo က de Recoletosသမိုင်းကြောင်းအရအနုပညာစိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်အတူလည်ပတ်မှုသည်မည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ပါစေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ခံစားရန်
ပြတိုက်သည် Franco အစိုးရ၏လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းမွေးဖွားခဲ့သည်ဟုသမိုင်းကဖော်ပြသည် 1972ထိုစဉ်ကပြန်ကြားရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးSánchez Bella ၏လက်မှဖြစ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းအတွက်ရုပ်ရှင်အဖွဲ့များကိုခေါ်ခြင်း၊ ဥပမာဇာတ်ကောင်များကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြေအနေများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စပိန်နှင့်နိုင်ငံတကာသမိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ကိန်းဂဏန်းများအတွက်သမိုင်းပညာရှင်တို့ဖြစ်သည်။
စိတ်ကူးကကိုယ်စားပြုဖို့ဖြစ်တယ် ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ပြဇာတ်ရုံ၊ ပြပွဲမှလူသိအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒါပေမယ့်လည်း သိပ္ပံ၊ အားကစားနှင့်သမိုင်း။ ထို့ကြောင့်အထူးပန်းချီကားများ၊ အ ၀ တ်အထည်များနှင့်အလှဆင်သူများအတွက်ပန်းပုဆရာများ၊ မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်များနှင့်အထူးကုတို့၏အားထုတ်မှုကိုမူလစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောပထမဆုံးသောပုံရိပ်များကိုအသက်ဝင်စေရန်အတူတကွစုစည်းခဲ့ကြသည်။
ဒီနေ့ရှိတယ် 450 သိရန်ကိန်းဂဏန်းများ အကယ်စင်စစ်သင်သည်အခြားသူများထက်သင်၏အရသာပိုမိုဖြစ်ကြောင်းအချို့ရှိလိမ့်မည်။ ကိန်းဂဏန်း ၄၅၀ ကိုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအဖြစ်ခွဲနိုင်သည်။ အနုပညာနှင့်သိပ္ပံ၊ အားကစား၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ကလေးများ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်သမိုင်း။
လယ်ပြင်၌ ကလေး တူဂန္ရှိပါတယ် Little က Riding Hood ကို, ET, ဂျော်နီ Deep ကာရစ်ဘီယံ၏ Pirates ထံမှသူ၏ဇာတ်ကောင်၌တည်၏ Bart Simpson, ဥပမာ။ နှင့်ပတ်သက် ပြ သူတို့ဖြစ်ကြသည် Leonardo Di Caprio၊ Marilyn Monroe၊ Justin Bieber၊ Tom Cruise သို့မဟုတ် Dwayne Johnson တို့ဖြစ်သည်, နိုင်ငံခြားသားများအကြားနှင့်စပိန်အကြား Plácidoဒိုမင်ဂို၊ Isabel Preysler၊ Sara Baras နှင့် Antonio Banderas။ ဆိုဖီယာ Vergara ကိုထည့်ပါ။
အတွက် အားကစား ပြတိုက်ရွေးချယ်ထားပါတယ် Cristiano ရော်နယ်ဒို၊ ရာဖေးလ်နာဒယ်၊ Mireia Belmonte၊ Marc Márquez၊ Javier Fernádezနှင့်စပိန်ဘောလုံးအသင်း။ အမျိုးအစားအဘို့ ကြောက်လန့် ငါတို့ကိုအမြဲကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီသတ္တ ၀ ါတွေ၊ သတ္တဝါတွေရှိတယ်၊ ဖန်ဆင်းခြင်းပဲ Frankenstein, Pennywise (ယခုရုပ်ရှင်နှစ်ခုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ) Dr. Knox နှင့် ဝံပုလွေ။
ငါကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးအစားတစ်ခုမှာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် ပုံပြင် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်နှာတွေကဂန္ထဝင်ပန်းချီကားတွေထဲကထွက်လာပြီးသမိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ပုံသဏ္andာန်နဲ့ပုံသဏ္giveာန်ကိုပုံဖော်ပေးတယ်။ ဖယောင်းပုံ ကားလို့စ် V ကို၏ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ Blas de Lezo၊ နပိုလီယံ၊ Cleopatra နှင့် Felipe VI တို့ဖြစ်သည် ပစ္စုပ္ပန်နှင့်တိုက်ဆိုင်မှုရန်မဟုတ်။
အမျိုးအစားအဘို့ သိပ္ပံနှင့်အနုပညာ ရွေးချယ်ထားသူတွေကိုပါပြီ Miguel de Cervates၊ မာဂရက်ဆာလာ၊ ၏အပန်းဖြေ မေ ၃ ရက်တစ် ဦး စာပေစုရုံးခြင်းနှင့်အကြီး Pablo Picasso။ သို့သော်ပြတိုက်၏စိတ်နှလုံးဖြစ်သောအားလုံးဖယောင်းကိန်းဂဏန်းများအပြင်, အဖွဲ့အစည်းအများကြီးပိုပေးထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီနေ့သင်တက်ရောက်နိုင်သည် ပါပလော Raijenstein အားဖြင့်စိတ်ပညာ session ကို Lorena Toréနှင့်အတူသူသည်ကိန်းဂဏန်းများနောက်ကွယ်ရှိလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်။
ဤ "အစည်းအဝေးများ" သည်လူ (၂၀) ​​အတွက်သာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အထူးလား။ အက်ဒွပ်နော်တန်နှင့်အတူစိတ်ပညာရှင်ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်သလား။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်လို့ ၁၉ ရာစုကလူတွေဒီထူးဆန်းတဲ့ပြပွဲတွေမှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြန်ဖော်ချင်ရင်ဒါကအခွင့်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ မင်းပြတိုက်ကိုအမှောင်ထုထဲကိုသွားမယ်၊သို့မဟုတ်မိနစ် ၈၀ ခန့်အတွက်ဖြစ်သည်။ အေးဆေး! စနေနေ့တွင်ရက်သတ္တပတ် ၁၃ ရက်၊ စနေနေ့ ၁၄ ရက်၊ သောကြာနေ့ ၂၀ ရက်၊ စနေနေ့ ၂၁ ရက်၊ သောကြာ ၂၇ ရက်နှင့်စနေနေ့ ၂၈ ရက်သည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၉ နာရီညနေဖြစ်သည်။ ည
အခြားတစ်ဖက်တွင်အောက်တိုဘာလသည်ပြတိုက်သို့ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်သည်။ ဟယ်လို! အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်မှ ၃၁ ရက်အကြားအချို့သောအချိန်များတွင်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်အချို့ပြန်လည်ရှင်သန်လာလိမ့်မည်။ အဆိုပါပြပွဲလည်းပြန်လည်ရောက်ရှိ ဟယ်လိုဝင်းပြပွဲ, Multivision အခန်းထဲမှာ Thriller ၏အံ့သြ remake နှင့်အတူ။ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၈ နှင့် ၃၁ ရက်တို့တွင်သီးသန့်ထားရှိပါသည်။ မမေ့နဲ့! ထိုထက်ပိုသည်မှာ, 27 ၏ည 28 နာရီမှည 31 နာရီမှအထွေထွေဝင်ပေါက်မှာ 31 x 8 ရှိပါတယ်။
ယခုအချိန်ထိပြတိုက်၏အကောင်းဆုံးပုံ။ ယခုအနည်းငယ်ပိုတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်။ ပြတိုက်ကိုဘယ်လိုစီစဉ်သလဲ။ ထဲမှာ အဓိကကြမ်းပြင် မင်းမှာရောမအင်ပါယာ၊ Visigoths၊ Al-Andalus, Austrias, Bourbons နှင့်ခေတ်သစ်ခေတ်တို့ပါဝင်သည့်သမိုင်းပြခန်းရှိသည်။ သင့်မှာလည်းရှိတယ် အဓိကပြခန်း တော်ဝင်မိသားစု၊ မေလ ၃ ရက်ပစ်ခတ်မှုနှင့်အတူ ပန်းချီခန်း, တ ရေကြောင်း, အ ပီရူးနှင့်မက္ကဆီကိုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်သေချာတယ် အမေရိကန်ဇာတ်ကောင်များ ထို့ပြင်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရှိသောဖလိုဂျီ ၂ ၏ပလာဇာဒီတာရို့စ်ကိန်းဂဏန်းများလည်းပါဝင်သည် ဝေးအနောက်, အ Sagrada Cena နှင့် Fantasy ထောင့်။
El ရထားလမ်း ထောင်ထဲ, ကြွက်, ငါးမန်းပါဝင်သည် Jurassic ပန်းခြံ, Star Wars နှင့် Galactic သက်သေမပေါ်, ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲနှင့် Pennywi ရဲ့မှောင်မိုက်လိုဏ်ဂူငါသိတယ်။ ပြတိုက်၏ mezzanine ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် ရာဇဝတ်မှုပြခန်း နာမည်ကြီးနှင့်အတူ Freddy Krueger, အ Inquisition နှင့်၎င်း၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒမြ, ကျော်ကြားရာဇဝတ်ကောင်နှင့်အမြန် Andalusia ၏အမြန်။ ပထမထပ်မှာ Multivision Room ရှိတယ်။
ပြတိုက်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ ကောင်းပြီ, လိပ်စာအတိအကျ Paseo de Recoletos 41 ဖြစ်ပြီးသင်ထိုအရပ်သို့ရောက်နိုင်သည် မက်ထရို၊ ရထား၊ စက်ဘီး၊။ Line4မက်ထရိုသည်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ အနီးဆုံးမီးရထားဘူတာသည်Cercanía de Recoletos ဘူတာဖြစ်ပြီးဘတ်စ်ကားလိုင်းများသည် ၂၇၊ ၁၄၊ ၅၊ ၄၅၊ ၅၃ နှင့် ၁၅၀ တို့ဖြင့်သင့်အားထိုဒေသတွင်ထားရှိသည်။ ဘူတာ ၁၀ နှင့်Marqués de Ensenada 27 တို့သည် bicimad နှင့်ကိုက်ညီသည်။
မက်ဒရစ်ဖယောင်းပြတိုက်မှာဘယ်နာရီရှိပါသလဲ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိနံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၂ နာရီအထိ၊ ညနေ ၄း၃၀ မှည ၈ နာရီအထိ၊ စနေနေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့များနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များသည်နံနက် ၁၀ နာရီမှည ၈ နာရီအထိဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေးဘယ်လောက်ပါလဲ? အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး လျှင် ၂၁ ယူရို၊ ၆၅ နှစ်ကျော် ၁၄ ယူရို၊ ၄ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်ကလေးများ၊ ၁၄ ယူရိုလည်းရှိပါသေးတယ်။ အွန်လိုင်းလူနှစ်ယောက်၊ ၃၂ ယူရို၊ မိသားစု ၂ လူကြီး + ကလေး ၂ ယောက်၊ ၅၃ ယူရိုအွန်လိုင်းနှင့်လက်မှတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုအတွက် ၁၈ ယူရိုကုန်ကျသည်။
အွန်လိုင်းလက်မှတ်များကိုပုံနှိပ်ရမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ မိသားစုကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ မသန်စွမ်းသူများရှိလျှင်လူငယ်ကဒ်သို့မဟုတ် ISIC ကဒ်ရှိလျှင်လျှော့စျေးနှင့်အတူတူပင်ရှိသည်။ အကြမ်းဖက်မှု၊ Multivision နှင့် Simulator များ၏ရထားသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ပြတိုက် visitors ည့်သည်များအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » မက်ဒရစ် » မက်ဒရစ်ရှိဖယောင်းပြတိုက်